by Ko Lin Wai Aung on Friday, February 3, 2012 at 10:39pm
မကဒတ( မပ) ၏အစခရီး
မကဒတ( မပ )ဟာ အခက်အခဲတွေကြားကနေ ပေါ်ပေါက် လာတာပါ… ဒီမတိုင်ခင် မကဒတ(ကချင်)ကိုအောင်မြင်စွာ ဖွဲ့စည်းနိုင် ခဲ့ကြသူတွေ ကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်ကြရမှာပါ…
၁၉၉၀မေလဆန်းလောက်မှာ ကျွန်တော်ခရိုင်မှူးတာဝန် နဲ့ရွှေကူခရိုင်ကိုသွားရပါတယ်… ကိုညီညီကျော် ကဗန်းမော်ခရိုင်၊ ကိုစိန်အေးကမိုးညှင်းခရိုင်၊ ကိုအောင်ကြီးကမိုးကောင်းခရိုင်ပါ…
ကိုမျိုးဝင်းလိုက်လာရတဲ့ကိစ္စက အရင်ခရိုင်မှူး ကိုအောင်မိုးကျော် KIA ရဲဘော်တချို့နဲ့ စကားအခြေအတင်ဖြစ်ပြီးသေနတ်မှန်သေဆုံးရတဲ့ကိစ္စရယ်…..
စည်းရုံးရေးမှူးတာဝန်ခေတ္တပေးထားတဲ့ ဦးသန်းထွန်းက မိန်းမယူထားတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ပါ…..
ဖြစ်ခဲ့တာပါ…စကားများရန်ဖြစ်ရင်း ကျည်ဆန်ထွက်ခဲ့လို့ဒီလို ဖြစ်ခဲ့တာလို့နှစ်ဘက်လုံး က ကောက်ချက် ချတယ်…KIA ရဲဘော်ကို အရေးယူမှုရှိမရှိ သေချာမသိတော့ပါ…
ရေဒီယိုကက်ဆက်ဝယ်ပြီး မိန်းမဆီပို့ထားတယ်… KIA ဆီကငွေထုတ်ပြီး ရဲဘော်တွေကို ရိက္ခာငွေမ ထုတ်ပေးလို့ရဲဘော်တွေအခက်အခဲ ဖြစ်ကြတာ စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါတယ်…
စစ်ဆေးဘို့ခေါ်ထားစဉ်မှာ ပြန်ထွက်ပြေးသွားခဲ့လို့ပြန်လည် ဖမ်းဆီးခဲ့ရပါတယ်…
ဦးသန်းထွန်းကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးပြီး ကြိမ်ဒဏ်( ၂၀ ) ချက်အပြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်… ( ခုံရုံးအဖွဲ့မှာ-
ကျွန်တော်၊တပ်ကြပ်ကြီးထွန်းလွင်၊တပ်ကြပ်စန်းအောင် တို့ ၃ ဦး ဖြစ်ပါတယ်…) ၊ ကိုစန်းအောင်ကနောက်ပိုင်းမှာ ဗန်းမော်ဘက်မှာ တိုက်ပွဲကျသွားပါတယ်…
ကိုမျိုးဝင်းဗဟိုပြန်သွားပြီးနောက်ပြသနာတခုက၀င်ပါပြီ……ဦးသန်းထွန်းခိုင်းထားတာတွေ လာပို့တာဆိုပြီးရွာသား(၂)ယောက်က လာပေးသွားတာပါ… အထဲဖွင့်ကြည့်တော့ စာရွက်စာတမ်းတွေ အများကြီးပဲ…..
NATIONAL DEMOCRATIC ARMY(NDA)အဖွဲ့ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာတွေရယ်… မကဒတ(မပ)ကို လိပ်မူတပ်ထားပြီးတင်မဲ့အဖွဲ့အစည်းကနှုပ်ထွက်ကြောင်းစာတွေရယ်…NDAဖွဲ့စည်းကြောင်းရေးထားတဲ့ စာတွေပါ…
ရွှေကူခရိုင်တစ်ခုလုံးကရဲဘော်တွေကို NDA အဖွဲ့အဖြစ်ပြောင်းမည့် အစီအစဉ်တွေပါ….
အန္တရာယ်များတဲ့အတွက် ဗဟိုကိုအမြန်တင်ပြပြီး ဦးသန်းထွန်းကိုစောင့်ကြည့်နေစဉ် အတွင်းမှာဘဲ… ဦးသန်းထွန်းတပ်ကထွက်ပြေးသွားပါတယ်…
နောက် ၁၉၉၀ ဇူလိုင်လဆန်းမှာ (၅၀၁)ရင်းမှူးကိုသိုက်ထွန်းဦးနဲ့ အဖွဲ့ရောက်လာတယ်…
တောင်ပိုင်းကနေလာခဲ့ကြတာပါ…အံ့သြချီးကျူးရပါတယ်…ခရီးအဝေးကြီးကလာခဲ့ကြတာပါ… လူ(၂၀)လောက်ရှိတယ်…တစ်ချို့ကလမ်းခရီးအဆင့်ဆင့်မှာကျန်နေခဲ့တာတဲ့…ကိုမိုးသီးလွှတ်လိုက် တာဖြစ်ပြီး မြောက်ပိုင်းတပ်တွေနဲ့လက်တွဲအလုပ်လုပ်ဘို့ ဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်….ကိုသိန်းထွန်း(ဆေးမှူး)၊ ကိုသန်းထွတ်၊ကိုနိုင်လင်း(နိုင်/စည်း)၊ တို့ပါတာတွေ့တယ်…
ကိုသိုက်က ကျွန်တော့အစ်မတွေနဲ့တစ်တန်းတည်း(Phy-hons) တက်ခဲ့တာသိရတယ်… ကိုမိုးသီးသူငယ်ချင်းပါ….ပိုပြီးရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်….တောင်ပိုင်းကရဲဘော်တွေရောက်လာတော့ ၀မ်းသာ ပြီးပျော်ကြတယ်…အားတွေလည်းပိုရှိသွားသလိုခံစားရတယ်… ရဲဘော်တွေလည်းပျော်ကြတယ်… အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဝက်အသေးတစ်ကောင်ဝယ်ပြီး ပေါ်လိုက်ကြတယ်…
တွေကို ဗန်းမော်ခရိုင်ကတဆင့် ဗဟိုကိုပို့ဘို့စီစဉ်ပေးရတယ်…
(၁၉.၀၇. ၁၉၉၀) အာဇာနည်နေ့ အခန်းအနားကို နှစ်ဖွဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်ခဲ့ကြတာသတိရပါတယ်..…
သိပ်မကြာခင်စစ်ဆင်ရေးတွေဝင်လာပါပြီ….ကိုက်ထိပ်ဘက်ကတစ်ကြောင်း၊နမ့်ခမ်း(မန်ဝိန်း)ဘက်က တစ်ကြောင်းမိုင်းခေါန်ဘက်ကတစ်ကြောင်းပါ…ကျွန်တော်တို့ကKIA ရင်း(၁၂) နဲ့တွဲနေတာပါ…
KIA ကာကင်းအဖွဲ့တွေနဲ့တဂျိမ်းဂျိမ်းတိုက်နေတဲ့အချိန် ကျွန်တော်တို့ရုံးအဖွဲ့တွေ၊ KIA ရုံးအဖွဲ့တွေ…နေရာရွှေ့ပြောင်းကြရတယ်…တပ်ကြပ်ကြီးထွန်းလွင်နဲ့တပ်စိပ်တစ်စိပ်ပဲKIA တွေနဲ့တွဲပေး ထား ခဲ့ရတာ မှတ်မိတယ်..…
ပြောင်းကြရွှေ့ကြနဲ့နောက်တစ်လလောက်နေတော့ ဗဟိုကအားလုံးပြန်တက်ခဲ့ ဘို့ကြေးနန်းဝင် လာတယ်။၁၉၉၀-သြဂုတ်လ တတိယပတ်လောက် ဗဟိုကိုပြန်ရောက်ပါတယ်… ဗဟိုရောက်ပြီးသိပ်မကြာခင် ကိုသံချောင်းမကြာမကြာပြောတတ်တာ မှတ်မိသေးတယ်…. ရဲလင်း..မင်းကိုငါသတ်ချင်တာတဲ့…တွေ့တိုင်းပြောတတ်တယ်…( ၅ )ကြိမ်ထက်မနဲပါ… သူကစိတ်ထဲရှိရင်မြုံမထားဘူး…ထုတ်ပြောတတ်တယ်…ကိုမျိုးဝင်းနဲ့မတူဘူး….
နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာက ဇော်ကို ကိုအရေးယူတဲ့ကိစ္စပါ….ကျွန်တော်ဗဟိုကိုရောက်ရောက်ချင်း ကြုံရတာပါ..ဇော်ကိုကရှေ့တန်း(မြစ်ကြီးနားခရိုင်)မှာ အဖွဲ့ပိုင်ငွေတွေကို တလွဲသုံးတယ်…ဘိန်းရှူတယ်...
စစ်ခုံရုံးမှာ အဲဒီတုံးကတရားရေးဋ္ဌာနကိုတာဝန်ယူရတဲ့ ဦးစိန်ပါတာသိရတယ်… ကျန်သူတွေဘယ်သူပါတယ်ဆိုတာ မသိဘူး… ဦးစိန်က အဲဒီအချိန်က မြစ်ကြီးနားခရိုင်မှူး တာဝန်ခေတ္တ ယူပြီး ပြန်ရောက်ချိန် ဖြစ်ပါတယ်…ဒါကြောင့်စစ်ခုံရုံးအဖွဲ့မှာထည့်လိုက်တယ်ထင်တယ်….
ဦးစိန်ကို ဥက္ကဋ္ဌကိုထွန်းအောင်ကျော်က သေသေချာချာမှာပါတယ်…ဥက္ကဋ္ဌ ကိုထွန်းအောင်ကျော်တဲမှာပါ…
ဇော်ကိုရဲ့အသက်ကို တတ်နိုင်သမျှကယ်ပါတဲ့… ဦးစိန်ကညနေကျတော့ကျွန်တော့်ကိုပြောတယ်….
ဘယ်လိုမှကယ်လို့မရတော့ဘူးတဲ့….သေဒဏ်ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်ကြတယ်လို့ သိရတယ်…
ဒီအချိန်က အပြစ်တစ်ခုရှိရင် စစ်ခုံရုံးဖွဲ့ပြီး ဆုံးဖြတ်ကြတယ်… ဗဟိုကော်မတီကမဆုံးဖြတ်ဘူး… သက်ဆိုင်ရာ တပ်မှူး၊ စစ်ရုံးတာဝန်ခံနဲ့၊စခန်းမှူး ၊ ထောက်လှမ်းရေးတွေနဲ့ခုံရုံးဖွဲ့လေ့ရှိတယ်… မဲခွဲခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် ဦးစိန်ရှုံးမှာသေချာပါတယ်…ခုံရုံးမှာကတပ်ကသူတွေအများစုနဲ့ဖွဲ့ထားတာဖြစ်နေ တယ်… ဇော်ကိုရဲ့ပြစ်ချက်တွေကတော်တော်များ တယ်လို့လည်း ဦးစိန်ပြောခဲ့တာရှိသလို… တပ်ဖွဲ့ဝင်တော်တော်များက ဇော်ကို ကိုအပြစ်ရှိသူတယောက် အနေနဲ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်…
၁၉၉၀-စက်တင်္ဘာလောက်မှာထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တွေကို ပြင်ဆင်တိုးချဲ့ထားတာ ရှိနေပါပြီ… တာဝန်ခံက သန်းဇော်(မန္တလေး)ပါ….ဇော်ဇော်မင်း(နမ္မား)၊ အောင်စိုးမြင့်(မိုးညှင်း)၊ကျော်ထင်ဦး(မိုးညှင်း)၊
တပ်ရင်း(၇၀၂)တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာရှိလာပါပြီ….ဗန်းမော်ခရိုင်ဘက်မှာစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင် မှုတွေစရနေပါပြီ….ကိုညီညီကျော်က ဗန်းမော်ခရိုင်မှာတာဝန်ယူတာပါ…
ရွေးကောက်ပွဲနှောင်းပိုင်း ကာလမို့ လူသစ်တွေဆက်လက်ဝင်ရောက် တာတွေရှိလာပါပြီ…
အောက်တိုဘာလဆန်းလောက် ကျွန်တော်တို့ ရှေ့တန်းနယ်မြေပြန်ထွက်ကြရတယ်… ကိုမြင့်ကျော်၊ကိုအောင်ကြီး၊ကိုသိုက်ထွန်းဦး(၅၀၁)၊ပါတယ်… (၇၀၂)ရင်းမှူးအောင်သန်း၊နဲ့ကိုမျိုးဝင်း လည်းပါတယ်… ကိုမျိုးဝင်းက စစ်ကြောင်းသွားလာရာ မှာ မြင်းတစ်ကောင်ကို စီးပြီးခရီးစဉ်တလျှောက် သွားခဲ့တာမို့ ရဲဘော်တွေရဲ့မျက်စေ့စပါးမွှေး စူးတာ ခံရပါတယ်…
နဲ့ ကျွန်တော်ကKIAရင်း(၁၁)နယ်မြေ မိုးကောင်းခရိုင်ကိုသွားကြတယ်… ကိုမြင့်ကျော်(ဗဟိုကော်မတီဝင်) က ပြည်တွင်းကို ပြန်ဝင် ရတာပါ…
နောက်ပိုင်းကိုမြင့်ကျော် အဖမ်းခံရပြီး နန်းတွင်းထောင်မှာ(၂)နှစ်နေခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်…
ကိုသိုက်နဲ့ကိုအောင်ကြီးတို့ဖားကန့်ဘက်ထွက်ဘို့လမ်းခွဲသွားကြတယ်…ရင်း(၁၁)နယ်မြေမှာကျွန်တော် ကျန်ခဲ့တယ်….နေက်ပိုင်း ၁၉၉၀-ဒီဇင်ဘာလောက်ထင်ပါတယ်…စစ်ကြောင်းတွေထိုးလာတော့ ရင်း(၁၁) အထိုင်ကခွာ ကြရပြီး တောတောင်တွေထဲမှာဘဲ နေရာရွှေ့ရွှေ့ပြီး နေရတယ်…မကြာခင် ရင်း(၅)နယ်မြေ ကနေ ကိုသန်းထွန်း စိုးရောက်လာပြီး သူ့ကိုဗဟိုကိုပြန်ဘို့ ကိုမျိုးဝင်းက လွှတ်လိုက်တာဆိုတာသိရတယ်… ကျွန်တော်လည်း မောင်မောင်ဆိုတဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ရဲဘော်ကိုသူနဲ့အတူထည့်ပေးလိုက်တယ်… နောင်ရာပါစခန်းမှာ ဆေးကုရအောင်ပါ…KIAလူခံတစ်ယောက်နဲ့ဧရာဝတီမြစ်တစ်ဖက်ထိပို့ဘို့စီစဉ်ပါတယ်…
နောက်နေ့ KIA ဒုရင်းမှူးကခေါ်တွေ့ပြီး ဆင်ဘိုအထက်နားမှာ ဆင်ဘိုကလာတဲ့စစ်ကြောင်းက ဖမ်းမိသွားတယ်ပြောပါတယ်… တောင်ယာတဲမှာညအိပ်နေတုံး ဖြစ်တာပါ…KIA လူခံကတဲပေါ်ကခုန်ချပြီး ထွက်အပြေးမှာ ခါးကိုသေနတ်မှန်ပါသေးတယ်…. အဲဒီဒဏ်ရာကိုပြလို့ကြည့်ခဲ့ရတာမှတ်မိတယ်…
နောက်တော့ကိုသန်းထွန်းစိုးနဲ့မြို့ပေါ်မှာ ပြန်ဆုံတယ်…မြစ်ကြီးနားထောင်မှာ(၂)နှစ် နေခဲ့ရတယ်တဲ့… ကံကောင်းပါတယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာဆက်ရှိနေမယ်ဆိုရင် သေစာရင်းထဲပါမှာလို့ပြောတော့- အဲဒီတုံးက ကိုမျိုးဝင်းရေးပေးလိုက်တဲ့စာထဲမှာ သူ့ကိုရှင်းပစ်လိုက်လို့ ရေးထားတယ်တဲ့…အဲလိုပြောတယ်…
၁၉၉၁ဧပြီလောက်ထိ ရင်း(၁၁)နယ်မြေထဲမှာ စစ်ကြောင်းတွေကို ရှောင်ရှားနေခဲ့ရတယ်…KIA ရုံးအဖွဲ့၊ ကျောင်းသားရုံးအဖွဲ့၊တွေဘဲရှိတော့တယ်…တိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့တွေက သံလမ်းအနောက် ဖက်ရောက်ကုန်ပြီ… နောက်တော့ ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ(ALP) က အတွင်းရေးမှူးနဲ့ (၇)ယောက် ရောက်လာကြတယ်…
ဖားကန့်ဘက်ကနေ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကိုခရီးဆက်ကြမှာပါ… KIA တပ်ရင်း(၁၁) ရင်းမှူးအသစ် နဲ့အတူ ဗဟိုကနေလာခဲ့တာပါ… ကရင်ပြည်နယ်ကနေလာခဲ့ကြတာတဲ့…မြန်မာပြည်မြေပုံအတိုင်းတစ်ပတ်ပတ်နေသလားထင်ရလောက်ပါ တယ်… လေးစားချီးကျူးမိပါတယ်…XING XING စီးကရက်တွေသွားပေးပြီး စကားပြော မိတ်ဆက်ခဲ့ တာ မှတ်မိပါတယ်…နောက်တော့ သူတို့လည်းခရီးဆက်ထွက်သွားကြတယ်… KIA စည်းရုံရေးမှူး အဖွဲ့လည်း ပါသွားကြတယ်.
ဒါနဲ့ရင်း(၅)နယ်မြေကအဖွဲ့နဲ့ပေါင်းနိုင်အောင် မိုးညှင်းခရိုင် မြေနီတောင်ဘက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်…
မြေနီတောင်မရောက်ခင်မှာဘဲ ဒုအရာခံဗိုလ်အောင်ရဲစိုး တို့အဖွဲ့နဲ့ဆုံတယ်… လူသစ်တွေ တော်တော်လေးပါလာတာတွေ့တယ်… တစ်ချို့ကယာယီစစ်သင်တန်းတက်ပြီးတာသိရတယ်.. နောက်တစ်ပတ်လောက်နေတော့
ကိုစိန်အေး(ခရိုင်မှူး) တို့အဖွဲ့တွေနဲ့ဆုံကြတယ်… ရန်ကုန်မှာအတူနေခဲ့တဲ့ ကျော်ဝဏ္ဏ(စမ်းချောင်း-အကသ)မြေနုစခန်းမှာ ကျသွားတာသိရတယ်…
စစ်ကြောင်းတွေထိုးတော့ခရိုင်ရုံးအဖွဲ့(၂)ဖွဲ့ရော လူသစ်တွေရော ပြောင်းရရွှေ့ရနဲ့ တနေရာမှာ(၂)ရက် ထက် ပိုမနေရခဲ့ဘူး…မှတ်မိတာတစ်ခုက- စစ်ကြောင်းတွေရှောင်ရင်း ၆၀ ဒီဂရီလောက်မတ်တဲ့တောင်ကြော တစ်ခုကိုတက်နေကြတာ….အဲဒီမှာရဲဘော် တစ်ယောက် အိုလမ်ပီယာ(OLYMPIA) လက်နှိပ်စက်ကြီးကို တရုပ်ကျော ပိုး အိပ်နဲ့လွယ်ပြီးတက်နေတာ... မာန်တင်းပြီးတက်နေတာ… နဲနဲမေးကြည့်တော့ရုံးအဖွဲ့ မှာပါတာတဲ့…မိုးညှင်းခရိုင်ရုံးအဖွဲ့မှာ ၀င် လုပ်ပေးနေတာတဲ့…အိန္ဒိယ CAMP ကနေ မြောက်ပိုင်းကိုစိတ် ၀င်စားလို့ လာခဲ့တာတဲ့…..
နောက်ပိုင်း ကိုမျိုးဝင်း ရင်း(၅)နယ်မြေကိုတစ်ခေါက်ပြန်ဆင်းလာပါတယ်… VCS (ဒုစစ်ရေးတာဝန်ခံ) အဖြစ်နဲ့ပါ…ဗဟိုကျမှဘဲအကျိုးအကြောင်းမေးမယ်လို့စဉ်းစားမိတယ်…မြင်းကိုဂျိုတပ် လိုက်ကြတာ လို့အဲဒီတုံးကမြင်တယ်…တွဲအတွင်းရေးမှူး(၁)မှာတင် ထောက်လှမ်းရေးရော….ကွန်မန်ဒိုတပ်ခွဲကော ကိုင်ထားတာပါ…
KIA ကဗိုလ်မှူးလဇိန်ဘောက်လည်းရောက်လာကြတယ်…DAB အစီအစဉ်နဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ စစ်ကြောင်းတွေဖွဲ့ပြီး လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ဖို့တဲ့… ကျွန်တော်တို့ဆီကစစ်ကြောင်း(၂)လို့ထင်တယ်… အစည်းဝေးတွေထိုင်၊ တာဝန်တွေခွဲကြနဲ့ အလုပ်များသွားကြတာမှတ်မိပါတယ်…
ရင်း(၁၁)နယ်မြေတွေမှာလှည့်သွားနေခဲ့ရတယ်…တော်တော်လေးဆင်းရဲပင်ပန်းကြပါတယ်… နောက်တော့ဗဟိုကိုပြန်တက်ကြဘို့ ကိုစိန်အေး၊KIA အဖွဲကတစ်ချို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီး ဗန်းမော်အထက် ဘက်ကနေ ဧရာဝတီကိုကူးပြီးနားလုံ အနီးကနေ နောင်ရာပါစခန်း ကိုရောက်ကြပါတယ်…
နောင်ရာပါစခန်းရောက်တော့ မြင်ကွင်းကမလှတော့ပါဘူး…KIAစခန်းရော၊ကျောင်းသားစခန်းရော ရေကြီးလို့မမှတ်မိလောက်အောင်ပျက်စီးနေတာတွေ့ရပါတယ်…သင်တန်းဋ္ဌာနတွေနဲ့အမြဲစည်ကားနေခဲ့ တာ…စခန်းဘေးမှာမိုးလဲချောင်းဆိုတာရှိတယ်….စခန်းအလယ်မှာစမ်းချောင်းသေးသေးလေးရှိတယ် …တောင်ကျရေ တွေစီးလာပြီး ချောင်းနှစ်ခုပေါင်းပြီး ချောင်းအကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်…အလယ်မှာရှိတဲ့ စခန်းတွေ၊တဲတွေအကုန်ပါသွားတယ်…ညဘက်ကြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်… ကျောင်းသားရဲဘော်(၁၁)ယောက်ရေထဲပါပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့ကြပါတယ်… ရန်ကုန်မှာအတူနေခဲ့ တဲ့ ကိုမိုးဟိန်း(စမ်းချောင်း-အကသ) လည်းပါသွားခဲ့တယ်… ညီအစ်ကို တွေလိုနေလာခဲ့တာပါ… KIA ရဲဘော်(၃၀)ကျော်လောက်လည်း ပါသွားတယ်လို့သိရတယ်…
နောင်ရာပါရွာထဲက ရေထဲမပါဘဲကျန်ခဲ့တဲ့ အိမ်မြင့်လေးတွေမှာတစ်ရက်နားကြတယ်….. ကျမ်းစာအုပ်တွေဖယိုဖရဲရေစိုနေတာတွေ၊ခေါင်မိုးလောက်ထိရေတွေဖြတ်စီးသွားလို့ရွှံ့နှစ်တွေနံရံမှာပေ
ဗဟိုဆိုတာ ရဲဘော်အားလုံးရဲ့ အနွေးထွေးဆုံးသောနေရာ ဖြစ်စေချင်ကြတာ ခံစားဘူးသူများသိကြမှာပါ…..
Ko Lin Wai Aung facebook မှကုးယူဖော်ပြသည်။